Palpalkokhabar.com | सेक्सको प्रस्ताव गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन्
सेक्सको प्रस्ताव गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन्
Posted on: September 19, 2016 | views: 1211
सिर्जना बस्नेत, मोडल |
मोडलिङको क्षेत्रमा भर्खरै मात्र प्रवेश गरेकी नृत्याङ्गना सिर्जना बस्नेत उमेरले १८ टेकेकी छिन् । चट्ट जिउ मिलेकी, हेर्दा राम्री देखिने बस्नेत मोडलिङको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी नवप्रतिभा हुन् । त्यसो त एक वर्षअघि नृत्य प्रशिक्षक शहदेव कोइरालासँग भेट नभएको भए यो क्षेत्रमा आउने सम्भावना निक्कै कम रहेको बताउने सिर्जनाले छोटै समयमा आफ्नो कुशल प्रतिभाका कारण आधा दर्जन म्यूजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेर भ्याईसकेकी छिन् । आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटनको माध्यमबाट यो क्षेत्रमा पहिचान बनाउने क्रममा रहेकी सिर्जना बस्नेतले प्रविन भट्टको निर्देशन तथा गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा रहेको ‘हासेँ होला, बोलेँ होला’ बोलको गीतबाट डेब्यू गरेकी हुन् । मोडलिङ पेसाले आफूलाई नरोजेको भए आज सायद एयर होस्टेज भएर आकाशे यात्रुको सेवा गरिरहेको हुने बताउने मोडल बस्नेतलाई मोडलिङको क्षेत्रचाहिँ सानैदेखिको इच्छा र चासोको क्षेत्र लाग्थ्यो रे ! आफ्नो इच्छा र चाहनालाई पूरा गराउन संघर्षको यात्रा तय गरेकी उनै नव मोडल सिर्जना बस्नेत आफ्नै बारेमा यसो भन्छिन्ः–
सबैले पचाउने र रुचाउने हुन्छु म
म मोडलिङ गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिन्छु । पछिल्लो समयमा आएको विकृती अर्थात् फेसनका नाममा भित्रिएको अश्लिलतालाई धेरै बढावा दिन्नँ । किनकी म्यूजिक भिडियोमा खेलीसकेपछि समाजले पचाउने र सबैले रुचाउने हुनुपर्छ । परिवारसँग बसेर हेर्न मिल्ने पनि हुनुपर्छ, त्यसैले म सबैले हेर्ने खालको म्यूजिक भिडियोमा मात्र मोडलिङ गर्छु ।
ठूलो सपोर्ट परिवार कै
यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुमा र अगाडि बढ्नुमा मेरो परिवारको ठूलो सपोर्ट छ । मेरा हरेक कदमलाई परिवारका सदस्यहरूले स्वीकार्नु हुन्छ र म कहिल्यै गलत बाटोमा पनि हिँडिन र हिँड्ने पनि छैन । परिवारले गर्नुभएको विश्वासलाई कायम राख्नेछु । र मलाई यहाँसम्म ल्याउन अझ सपोर्ट गर्ने मेरा गुरु सहदेव कोइरालालाई पनि सम्झन चाहान्छु ।
बेड सिन दिन्नँ
म्यूजिक भिडियोमा मोडलिङ शुरु गरेपछि फिल्मको अफर पनि मलाई आयो । तर, लामो समय दिनपर्ने भएपछि मेरो पढाईले गर्दा समय दिन सकिनँ । मैले चाहे म्यूजिक भिडियो होस्् या फिल्म नै किन नहोस्् अङ्ग प्रदर्शन भने कहिल्यै गर्दिनँ । राम्रो भूमिकाको अभिनय मात्र म गर्छु । अङ्ग प्रदर्शन गरेर भन्दा अभिनय कलाबाट चर्चामा आउन चाहान्छु । चलचित्रमा खेलेको अवस्थामा ‘बेडसिन’ दिन्नँ बरु यो क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन्छु तर ‘बेड सिन’ दिन्न ।
सेक्स प्रस्ताव गर्ने आँटै गरेनन्
यो क्षेत्रमा लागेपछि प्रेम प्रस्ताव त आईहाल्दो रहेछन्, प्रस्ताव धेरै आएपछि पनि म एक्ली नै छु । तर, म सानै उमेरको भएर पनि होला सेक्सको प्रस्ताव गर्ने कोसिस कसैले गरेका छैनन् ।
सेक्सी पुरुष–आर्यन सिग्देल
सेक्सी पुरुष त धेरै हुनुहुन्छ र कलाकारिताकै क्षेत्रमा हेर्दा मलाई लाग्ने नेपाली सेक्सी पुरुषमा अभिनेता आर्यन सिग्देल सेक्सी पुरुष लाग्छ । सायद चकलेटी भएर हो कि !
सेक्स सबैलाई चाहिन्छ
सेक्स के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर त सजिलै छ नि । हरेक प्राणीलाई चाहिने प्राकृतिक प्रक्रिया हो, हरेकलाई चाहिन्छ । तर त्यो कुराको पनि समय हुन्छ, धेरै कुरामा ध्यान दिनु जरुरी ठान्छु र त्यस्तो बेला मेरो भएको छैन ।
ड्रिङ्क्स गरेको छैन
उमेर त सानै छ । तर, यो क्षेत्रमा लागेपछि धेरैले प्रयोग गर्ने अल्कोहल कत्तिको पिउनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्– ‘मलाई मन पर्ने खानेकुरा मःम हो । असाध्यै मनपर्छ र धेरै खाने पनि गरेकी छु । तर त्यो कुरा मलाई बनाउन भने आउँदैन । चर म चिकेन फ्राई निक्कै मिठो बनाउँछु । तर, बनाउनै नआउने चाँहि मटन पर्छ । मैले ड्रिङ्क्स गर्दा पानी पिएको छु तर रक्सीजन्य कुराहरू अहिलेसम्म पिएकी छैन र पिउँदिन पनि । मान्छेले आफूलाई मन परेको खानेकुरा खानुपर्छ । मन नपरेको खानेकुरा साथीभाईको लहैलहैमा लागेर वा कसैका लागि खाइदिने गर्नुहुँदैन । मेरो मनले नमागेको कुरा म कहिल्यै खाँदिन, चाहे त्यो जतिसुकै मिठो परिकार हो ।
मुसा र सर्पदेखि खुब डर लाग्छ
मलाई सबैभन्दा बढी डर लाग्ने जनावर भनेको मुसा र सर्प हो । यि दुई कुरामा असाध्यै डर लाग्छ । मुसा कराएको सुनेँ भनेपछि सात्तो जान्छ होला मेरो त । त्यस्तै सर्प त झन् देख्नै हुन्न, अझ बाटो एक्लै हिड्दा खुट्टामा बेरियो भने त म त्यहिँ चिच्चाएर कराएर त्यतिकै बस्छु होला ।
सात दिनसम्म मकै बारीमा
सानो छँदा त धेरै रमाईलो कुराहरू हुन्थे । म पाँच कक्षामा पढ्दा स्कुल जान भनेपछि साह्रै अल्छि थिएँ । एक पटक सात दिनसम्म मकै बारीमा खेलेर बसेकी छु । घरबाट स्कुल जाने भनेर ड्रेस लगाएर हिँड्ने अनि दिनभरी मकैबारीमा खेल्ने साँझ घर फर्कने फेरी अर्को दिनपनि त्यसै गर्ने गरेर सात दिन बिताएकी छु । पछि ममीले त्यो कुरा थाहा पाएर एक दिनभरी बाख्राको खोरमा थुन्नुभएको थियो । त्यो दिनको क्षण कहिल्यै बिर्सिन्नँ होला । बाँकी त भोग्नु धेरै छ ।
प्रस्तुतिः गोपिकृष्ण चापागाईं